Svondo 19 Ndira 2020
Vanotakura Zvinhu Zvinopfuura nePamuganhu weNyika Voshora Mitemo Mitsva yeZimra
Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors, VaFradreck Maguramhinga, vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuve wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzerwi nehurumende.
Ndira 17, 2020
Varairidzi Vodzikira Chimiro Munzvimbo Dzavanodzidzisa?
Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, hupenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa.
VaChiwenga neMudzimai Wavo Voedza Kurambirana Kunze kweMatare
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, vanonzi vatenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo, Muzvare Marry Mubaiwa, inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana huroyi.
Ndira 16, 2020
Zinasu Inoti Mari yeDzidzo yePamusorosoro Haifaniri Kukwidzwa
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro, Muzvinafundo Amon Murwira, vaudza Studio7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro pamwe neyekugara pachikoro haifaniri kudarika zviuru zvishanu zvemadhora.
VaMnangagwa naVaChamisa Vokurudzirwa Kuita Hurukuro Sezvo Nyika Yananga kuMawere
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyika inogona kuguma yaenda kumaziva ndadzoka kana pakasaitwa nhaurirano nechimbi chimbi pakati pemutunga`miri wenyika VaEmmerson Mnanngagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC VaNelson Chamisa.
Ndira 15, 2020
Human Rights Watch Inoti Hurumende yaVaMnangagwa Iri Kutyora Kodzero dzeVanhu
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raburitswa gwaro riri kupomera mhosva mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Vamwe Vana Votadza Kuenda Kunodzidza Sezvo Vasina Magwaro Anodiwa kuSouth Africa
Vana vakawanda vezvizvarwa zveZimbabwe vari kudzidza muSouth Africa vatadza kuenda kuchikoro pazvavhurwa muSouth Africa sezvo vana ava vasina magwaro edzidzo, kana kuti study permits.
Varairidzi Vakawanda Havana Kuenda kuMabasa Avo
Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kubasa nhasi nechikonzero chekuti hadzisi kukwanirwa nemari dzemihoro.
Ndira 14, 2020
Zimbabwe Yonyorerana Chibvumirano cheMari neChina
Gurukota rinoona nezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, vakati Zimbabwe yainge yanyorerana chibvumirano neChina chekuchinjana mari kuitira kuti kutengeserana kwenyika mbiri idzi kuve nyore.
Zvikoro Zvinovhurwa Pasina Dzidzo Iri Kuitika Muzvikoro Zvakawanda
Ongororo yaitwa neStudio7 mudunhu reMasvingo, yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro, vasingadzidze, uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange hazvo vanga vasina kubhadharirwa mari idzi.
Ndira 13, 2020
Zvinhu Zvichiri Zvakaita Manyama Amire Nerongo muZvipatara
Kunyange hazvo hurumende iri kuti vanachiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa.
VaObert Gutu Vasiya Basa seMutevedzeri waMuzvare Khupe
Mapurisa Anosecha Mahofisi eMDC muHarare